By Android လုလင် - February 18, 2014
တင်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီဗျာ 18+ Game ယောက်ကျားလေးများသာသီးသန့်ကစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Game လေး ထဲမှာ မိန်းမလှလေးများနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ညှိနှိုင်းနိုင်ပါစေလို့ဘဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Unlimited Game လေးဖြစ်တဲ့အတွက် ထုံးစံအတိုင်း စိတ်ကြိုက်ကစားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Screen Shot တွေတော့ မတင်ပေး လိုက်တော့ဘူးနော်။ ဟဲဟဲ မတင်ရဲလို့ပါ။ ဒီGame အကြောင်းကိုတော့ သိချင်ရင် ကိုယ်တိုင်သာကစားကြည့် ကြပါဗျာ။ ဒီGame လေး က အသက် 18နှစ်အထက်ယောက်ကျားလေးများသာ ကစားရမှာဆိုတော့ ကျွန်တော်က အသက်18နှစ် မပြည့်သေးလို့ မကစားရသေးပါဘူးဗျာ :) ။ ကစားလို့လည်းကောင်းမယ့်ပုံမှာရှိတယ်ဗျ။ အဆင့်ပေါင်း 35 ဆင့်အထက် ကျော်ဖြတ်ကစားရတယ်လို့ Google Play မှာရေးထားပါတယ်။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
**Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ **Step-2. "5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။
**Step-3. " << SKIP >> ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။ **Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။ ** အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
By Android လုလင် - August 29, 2013
By Android လုလင် - December 01, 2014